Chakra Curie: Post-Installation ကိုဖြေရှင်းခြင်း Linux မှ
Chakra Curie - တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
1 Chakra Linux ၏လက်ရှိအခြေအနေ
Chakra Linux ၏လက်ရှိအခြေအနေ
ကောင်းပြီ၊ တိုတိုပြောရရင် "သတင်း" ပို့စ်ကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သဖြင့်ငါပြောရမည်မှာ Chakra သူဟာပြproblemsနာပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများ၏နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်သင့်အားရေးသားထုတ်ဝေသောစာမူများစွာကိုကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့သည် အသားစား (Caledonian စာရေးဆရာနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး Chakra Linux).
သင်လင့်ခ်များကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ (Malcer သည်လက်ရှိတွင် Chakra နှင့်ပြန်လည်ပူးပေါင်းပြီးအသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ D)၊ ဒီမှာ y ဒီမှာ.
အင်္ဂလိပ်စာတတ်ကျွမ်းသူများအတွက်အထူးသဖြင့် dev-lists များကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီချည် အဓိကဆာဗာ၏ပျက်ကျမှုကိုင်တွယ်ခဲ့သည့်အတွက် Chakra.
Chakra Linux သည်လက်ရှိတွင်နေထိုင်သည် www.chakraos.orgအခြားနေရာများတွင် Chakra ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ယနေ့ကဲ့သို့ဤကဲ့သို့သော:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပါဝင်ပတ်သက်သည် (ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် dev စာရင်း xD တွင်ပါဝင်သည်) နှင့်ပြောမည်ဖြစ်သည်။ Chakra Linux. ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ distro တစ်ခုပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် GTK application များ၏ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏မူဝါဒများကြောင့် appmenu-gtk ကိုကျွန်ုပ်မသုံးသော desktop အမျိုးအစားနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်။ မရနိုင်သောသေးငယ်သောအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
Chakra ၎င်းကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းသည်နှင့်သင်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည် GTK ပြီးတော့ repo ကိုသက်ဝင်စေပါ အပို o သင့်ကိုယ်ပိုင် packages များ (တစ် ဦး ချင်းစီ packages များမှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ် ဦး မှတဆင့်ဖြစ်စေ) ကိုစုစည်း ဒေသခံသိုလှောင်ရုံ) ကနှစ် ဦး စလုံး application ကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် GTK qt ကဲ့သို့. သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အခြေပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်တယ် GTKအပေါ်အာရုံစူးစိုက် KDE ပြီးတော့ငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည် ငါစနစ်နှင့်အတူချင်သမျှ။
သို့သော်အားနည်းချက်မှာ iso of current ဖြစ်သည် Chakra (ကူရီ) ၎င်းသည်ဆာဗာရွေ့လျားမှုအားလုံးကြောင့်ခေတ်မမီတော့ပါ၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်နှောင့်ယှက်မှုအမှားများကိုတွေ့ရသည် (၎င်းတို့ကိုအစီရင်ခံပြီးဖြစ်သည်၊ Chakra ဒါကတကယ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်) Chakra Linux ဒီ distro ကိုစချင်တဲ့သူတွေကဒီမှာဒီပြproblemsနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်၊ Chakra Curie 100% ရန်။
ဒီအမှားအယွင်းများကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးပါပြီ ဖြေရှင်း ၏လာမည့် ISO ၌တည်၏ Chakra Linux
အဖြစ်မကြာမီသူတို့တပ်ဆင်ပြီးစီးအဖြစ် Chakra Curie သူတို့သတိထားရမယ့်အချက်ကသူတို့ login လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်၊ ဝင်ရောက်ရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏သုံးစွဲသူအမည်ကိုနှိပ်ပါ, သူတို့စကားဝှက်ကိုဘယ်လောက်ပဲရိုက်ထည့်ပါသူတို့ရလိမ့်မယ် အမှား.
ဘယ်လို ၀ င်ရမလဲ (ခေတ္တအောက်တွင်ဖြေရှင်းနည်းသည်):
စကားဝှက်ကိုမထည့်သွင်းမီသုံးစွဲသူကို ဦး စွာနှိပ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်၏အထူးသဖြင့်ကိစ္စတွင်ထူးဆန်းသောခွင့်ပြုချက်ပြcausedနာများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် (၎င်းသည်အလင်းထွန်းလင်းမှုနှင့်ကျဆင်းစေသောသော့များကိုပင်ပုံရသည်) ငါပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားရင်ခွင့်ပြုချက်ပြandနာတွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လာကြလို့ပါ။ The အဖြေ iso ထဲတွင်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းပါဝင်သည် Curie ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့် ဖန်တီး၍ မှန်ကန်သောခွင့်ပြုချက်ကိုပေးသည်မဟုတ်။
၁။ KDM အတွက်လမ်းညွှန်ဖန်တီးခြင်း
၃) စက်ကိုပြန်ဖွင့်သည် (ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်သာအသုံးဝင်သည်မဟုတ်)
၄။ krunner (alt + f4) ကိုဖွင့်ပြီး၊ “ kdm” ကိုရေးပြီး“ Access screen” ကိုရွေးသည်။ “ Users” tab သို့သွားသည်။ “ User Images” မှကျွန်ုပ်တို့၏ user ကိုရွေးပြီးထို့နောက်ပုံတစ်ခုပေးသည်။ "apply" တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား root password တောင်းလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်
အဆင်သင့်။ ဒီနည်းနဲ့ KDM ပြtheနာနှင့်ခွင့်ပြုချက်ပြresolveနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဤအမှားသည်ဆာဗာများ၏ရွေ့ပြောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လုပ်တာကငါတို့တည်းဖြတ်တာပဲ မှန်ဘီလူး သင်အကြံပြုသောဆာဗာကိုထည့်ရန် www.chakraos.org:
ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းမှာကျနော်တို့ထောက်ခံတဲ့ဆာဗာကိုထည့်ပါ
ထည့်ရန်လိုင်း "ဆာဗာ = http://rsync.chakraos.org/$repo/x86_64"
... ငါတို့ကျန်ရှိသော မှန်ဘီလူး အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
ယခုကျွန်ုပ်တို့ system ကို update လုပ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင် repos လည်ပတ်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းသောအရာအားလုံးကို“ ဟုတ်ကဲ့” ဟုပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် repos ထက်မကြာသေးမီက local version များရှိသည်ဟုသင်တွေ့လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ bug တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ Curie တည်ငြိမ်သော repos တွင်မရှိသေးသော packets များကိုယူဆောင်လာသည်။
ကောင်းပြီ, ဒီနှင့်အတူသူတို့ပြီးသားရှိနိုင်ပါသည် Chakra Curie, အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့, နှုတ်ခွန်းဆက်သ! 😀
Community Spanish Forum
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Chakra Curie - တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
Tete သည်မှန်ကန်သောအချိတ်အဆက်များပါရှိသော iso အသစ်ထွက်မလာသရွေ့အလွန်အရေးကြီးသည်။
ပိုကောင်းလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ငါမှတ်ချက်ကို join ။
ငါ Chakra Fritz ထံမှ login bug ကိုကြုံတွေ့ရသည်
ဘယ်လောက်သိချင်လဲ… OSD က XD ကိုမမှတ်မိဘူး
Malcer သည်ထို Chakra Team သို့ကောင်းသောအရာသို့ပြန်သွားသည်။ အားလုံးနီးပါးကဲ့သို့သောပြthroughနာများကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သော်လည်းအလွန်ယခု Kaos တွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ချမ်းသာသည်။ အကောင်းဆုံးကိုသိသည့်ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်းဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဟုတ်တယ် hdmi ရဲ့အသံကိုငါလုပ်တယ်
ကံမကောင်းစွာဤနောက်ဆုံးသော ISO 2014.05 « Descartes »တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ
အရာအားလုံးကောဘာလဲ xD, ငါဒေးကားတွင်ပါ ၀ င်ပြီး login ကိုဖြေရှင်းသည်။ အခြိနျမှနျမှအခကျအခဲမြားရှိသေးသညျ။ ၂ ပတ်အပို repo ပြexperiencedနာများကျွန်ုပ်မကြုံတွေ့ရပါ၊ ၎င်းတို့သည် hosting ပြောင်းခြင်းကိုစဉ်းစားနေပုံရသည်၊ ဒီအခြေအနေ xD
အမှားများကို logging လုပ်သည့်အခါ hdd မှ boot တက်ပြီးနောက် grub မှန်ကန်စွာ install လုပ်မထားကြောင်း (operating ssytem မတွေ့ပါ), ငါ့အံ့အားသင့်စရာပြီးနောက်မနေ့ကမုသား
Squid နှင့် Easylist ဖြင့်ကြော်ငြာကိုပိတ်ပါ
သင်၏ hard drive ရှိအကြီးဆုံးဖိုင်တွဲများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရှာဖွေပါ